बिहे भएकै दिनबाट जव सुनिता थापालाई आफ्नै श्रीमानले यस्तो सम्म गरेपछि, अहिले प्रहरी खोरमा हालिन श्रीमानलाइ ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /Banner news/बिहे भएकै दिनबाट जव सुनिता थापालाई आफ्नै श्रीमानले यस्तो सम्म गरेपछि, अहिले प्रहरी खोरमा हालिन श्रीमानलाइ !
काठमाडौ- आफ्नै श्रीमानले पत्निको इच्छा बिपरीत जबर*जस्ति कर*णी गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा युवराज कार्की रहेका छन् ।
उनले श्रीमतीलाई इच्छा विपरित सम्बन्ध राखेको भन्दै श्रीमतीले प्रहरीमा उजुरी गरेपछि उनि पक्राउ परेका हुन् । टेम्के मैयुङ गाउँपालिका भोजपुर माइती भएकी १७ वर्षीया सुनिता थापाले प्रहरीमा उजुरी गरेपछि सुनसरी धरान उपमहानगरपालिका(६ का २१ वर्षीय युवराज कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
कार्कीले श्रीमतीले जबरजस्ती कर*णीको उजुरी दिए पछि बिहिबारनै कार्कीलाई पक्राउ गरिएको धरान प्रहरीले जनाएको छ। तर उनिहरुको केशि महिना अघि मात्र विवाह भएको थियो । सुनितालाई उनका पतिले विवाहकै दिनबाट कुटि*पिट गर्ने थालेका थिए । आफ्नो इच्छा विपरित सम्बन्ध राख्दै आएको सुनिताको आरोप छ।
उनकी श्रीमतीलाई भने वीपी कोइराला स्वास्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिसकिएको छ । पक्राउ पर्ने कार्की विरुद्ध प्रहरीले जबरजस्ती करणी ऐन अन्र्तगत मुद्धा दर्ता गराएर अनुसन्धान शुरु गरिसकेको छ।
साउन ७ गते पछि विमानस्थल खुल्दै : अब यसरी गर्नुस् सुरक्षित हवाईयात्रा…